Ọdịnaya Ọdịnaya: Chefuo Ihe He Nuru Ruo Ugbu a ma Bido Nweta Ntugharị site na isoro ntuziaka a | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 15, 2018 Tọzdee, Febụwarị 11, 2021 Stefan Des
Ọ na - esiri gị ike ịmepụta ndu? Ọ bụrụ na ị zara ee, ị gaghị anọ naanị gị. Hubspot kọrọ na 63% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ịmepụta okporo ụzọ na ụzọ bụ nsogbu kachasị ha.
Mana ị nwere ike ịnọ na-eche:
Kedu ka m ga - esi nweta ahịa m?
Ọfọn, taa a ga m egosi gị otu esi eji ahịa ọdịnaya ewepụta ụzọ maka azụmahịa gị.
Marketingre ahịa ọdịnaya bụ usoro dị irè ị nwere ike iji mepụta ndu maka azụmaahịa gị. Dị ka Marketo si kwuo, 93% nke ụlọ ọrụ b2b na-ekwu na ahịa ọdịnaya na-ewepụta ihe na-eduga karịa usoro azụmaahịa ọdịnala. Nke a bụ ihe kpatara ya Ndị ahịa 85% 0f b2b kwuo na ndu ndi ndu bu ihe kachasi nkpa ahia ha na 2016.
N'ime ntuziaka a, ị ga-amụta otu esi ewepụta ndu site na iji ahịa ọdịnaya. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ igbanye ụzọ maka azụmahịa gị, mgbe ahụ ị ga-ahụ ntụzịaka a n’anya.
Kwụpụ 1: Họrọ Ndị Na-ege Ntị Kwesịrị Ekwesị
Ezigbo usoro ọdịnaya ga-agụnye ịhọrọ ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị nke ga-eri ọdịnaya gị. Ya mere, tupu ịmalite ịmepụta ọdịnaya gị, ịkwesịrị ịma ezigbo onye ahịa gị. Needkwesịrị inwe ihe ọmụma zuru ezu gbasara afọ ha, ọnọdụ ha, ọnọdụ ha na-akpata, usoro agụmakwụkwọ ha, aha ọrụ ha, okike ha, ihe osise ha, wdg. Nkọwa ndị a ga-enyere gị aka ịzụlite onye na-azụ ahịa.
Onye na-azụ ahịa na-anọchite anya ọdịmma na omume gị dị mma ka ha na azụmahịa gị na-emekọrịta ihe. Otu ngwa ọrụ ị nwere ike iji kee onye zụrụ gị bụ Google Analytics ma ọ bụ Xtensio.
Etu ị ga - esi nweta nkọwapụta nke ezigbo ndị ahịa gị na nchịkọta Google
Banye na akaụntụ Google Analytics gị wee pịa taabụ taabụ. N'okpuru taabụ ndị na-ege ntị bụ igwe mmadụ (ọ nwere afọ na okike nke ndị na-ege gị ntị), taabụ mmasị, taabụ Geo, taabụ omume, teknụzụ, mkpanaka, wdg.
Pịa na nke ọ bụla n’ime ha iji gosipụta njirimara ndị na-ege gị ntị. Nyochaa data ị nwetara ebe ahụ iji mepụta ọdịnaya dị ukwuu maka ndị na-ege gị ntị.
Nke abuo, ị nwere ike ịmepụta gị asịwo persona na-enyemaka nke Xtensio. Ọ bụ ngwa ga - enyere gị aka ịmepụta personas mara mma site na iji ndebiri. Ọ bụrụ na ịnweghị nkọwa nke onye ahịa gị, ịnwere ike iji ndị a Mee ngwa ngwa Consulting Group's ajụjụ infographic.
Azịza nye ajụjụ ndị dị n’elu ga-enyere gị aka ịmepụta onye na-azụ ihe kwesịrị ekwesị maka ndị na-ege gị ntị.
Ozugbo ị ghọtara onye ndị na-ege gị ntị bụ, ị nwere ike iji ya mepụta ọdịnaya bara uru maka ha.
Nzọụkwụ 2: Chọta Contdị Ọdịnaya Kwesịrị Ekwesị
Ugbu a ị nwere foto nke ezigbo onye ahịa gị, oge eruola ịchọta ụdị ọdịnaya kwesịrị ekwesị maka ha. E nwere ụdị ọdịnaya dị iche iche ị nwere ike ịmepụta maka ndị na-ege gị ntị. Mana maka nzube nke ndu ndu, ịchọrọ:
Blọgụ blọgụ: Blogmepụta ihe ntanetị dị mkpa maka ọgbọ ndu. Chọrọ ọkwa blọọgụ dị elu nke ga-akụziri ma gbaa ndị na-ege gị ntị ume. E kwesiri ibuputa ihe ntinye ederede na oge obula. Dabere na Hubspot, b2b ụlọ ọrụ ndị blọọgụ 11 + ugboro kwa ọnwa nwetara karịa 4x dị ka ọtụtụ na-eduga karịa ndị na-ede blọgụ naanị 4.5 ugboro kwa ọnwa.
E-Akwụkwọ: E-akwụkwọ dị ogologo ma dị omimi karịa blog posts. Ọ na - agbakwunye ndị na - ege gị ntị uru ma ọ bụ nnukwu ngwaọrụ maka ebumnuche ọgbọ. Ndị ahịa gị nwere ike ibudata ya mgbe ịbanye na listi email gị.
Video ọdịnaya: Vidiyo na-achọ oge na ego iji mepụta. Agbanyeghị, ọ na - ewepụta aka mgbe emechara ya. Fọrọ nke nta 50% nke ndị ọrụ ịntanetị chọọ vidiyo metụtara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ tupu ị gaa na ụlọ ahịa.
Infographics: Infographics na-ewu ewu karịa ka ọ dị na mbụ. O nwere data a haziri ahazi nke egosiputara n'usoro ihe omuma. Nwere ike ịgbakwunye ya na blọgụ gị ma kesaa ya na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta.
Obere-N'ezie: Nwere ike ịmepụta obere ọmụmụ na niche gị iji kụziere ndị na-ege gị ntị ihe ịmatakwu banyere onyinye gị. Nke a nwere ike ịbụ usoro ederede na otu isiokwu ma ọ bụ usoro vidiyo.
Webinars: Webinars dị mma maka ebumnuche ọgbọ ndu. Ọ na - enyere aka iwulite ntụkwasị obi na ndị na - ege gị ntị. Nke a bụ ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ tupu ha enwee ike ịzụ ahịa gị.
Ugbu a na ịmara ụdị ọdịnaya dị mkpa nke ga-ebugharị okporo ụzọ ma mee ka ha bụrụ ụzọ maka azụmaahịa gị, ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịchọ ọwa kwesịrị ekwesị iji kwalite ọdịnaya ahụ.
Nzọụkwụ 3: Họrọ Correct Channel na-agbasa Ọdịnaya Gị
E nwere ụdị ọwa dị iche iche ị nwere ike iji kesaa ọdịnaya gị. Ha nwere ike ịbụ n'efu ma ọ bụ kwụọ ụgwọ. Ọwa ahụ anaghị akwụ ụgwọ kpamkpam ka ị ga-eji oge gị na-akwụ ụgwọ. Ọ na-ewe oge dị ukwuu iji gbasaa ọdịnaya ma hụ nsonaazụ pụtara. Ọwa efu gụnyere netwọ mgbasa ozi mmekọrịta (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, G +, Instagram, wdg), Forumzụ ahịa Ọgbakọ, Akwụkwọ ndị ọbịa, wdg.
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze egosila na ọ bụ ụzọ dị irè maka azụmaahịa. Dabere na Ad Age, na-azụ ahịa na-ekwu na mmadụ mgbasa ozi Egwuregwu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu ọrụ na ịzụta mkpebi dịka igwe onyonyo.
Kwesighi iji ọwa niile, họrọ naanị nke dabara adaba ebe ị nwere ike ịchọta ndị na-ege ntị ịkọwapụtara n'elu.
Maka ọwa akwụ ụgwọ, ị ga-etinye ego na mgbasa ozi. Uru nke ọwa a na-akwụ ụgwọ na ọwa efu bụ na ọ dị ngwa iji nweta nsonaazụ ma ọ na-azọpụta oge. Ihe niile ị chọrọ bụ ịkwụ ụgwọ maka mgbasa ozi na ị ga-amalite ịnweta okporo ụzọ nke nwere ike ịgbanwe gaa na-eduga. Nwere ike kpọsaa na mgbasa ozi mmekọrịta (Twitter, Facebook, Instagram, wdg), Mgbasa ozi Google, Bing, wdg.
Kwụpụ 4: Kwadebe Igwe Ọdụdọ Gị
Igwe ndu bụ ihe na-enweghị ike igbochi ị kwadebere maka ndị ahịa gị. Ọ bụ akụ nke ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya ga-edozi nsogbu ha. Nke a pụtara na ọ ga-abụrịrị ihe bara uru, nke bara uru, nke dị elu ma dịkwa mfe maka ha ịgbari.
Ebumnuche nke magnet gị nwere ike ịbụ akwụkwọ ntanetị, akwụkwọ ọcha, ngosi, wdg. Ebumnuche nke magnet bụ iji nyere ndị na-ege gị ntị aka ịmụta ihe n'aka gị. Ka ha na-amata banyere gị, otú ahụ ka ha ga-atụkwasịkwa akara gị obi.
Ichoro ezigbo ihu ala nke gha arata ndi na ege gi ka ha denye aha ha. Ebe ezigbo ọdịda ga-enyere gị aka ijide ozi ịntanetị nke ndị ọbịa gị.
Dị ka ihe atụ, nke a bụ otu n’ime LeadsBridge kacha ebudatara ndu ndu igwe.
Otu ụzọ iji bulie nsonaazụ gị bụ iwebata ngwanrọ peeji nke ọdịda gị na CRM ma ọ bụ sọftụwia email gị, dị ka MailChimp, Aweber, wdg. .
Kwụ na 5kwụ XNUMX: Dee High Quality Blog Posts
Echefula ọdịnaya dị na ire ahịa ọdịnaya. Idu ndu na ahia ahia na-aru oru n’ihi ọdịnaya. Ikwesiri itinye aka na ederede blọgụ dị mma iji mee ka ndị na-ege gị ntị bụrụ ndị ndu.
Ezi blog post ga-enwerịrị isiokwu nwere ike ịpị ọnụ nke ga-arata ndị na-ege gị ntị ka ha pịa ma gụọ. Ihe omumu ihe nlere anya nke Copyblogger kpughere 8 n’ime mmadụ iri ọ bụla ga-agụ akwụkwọ isi, mana naanị mmadụ 10 n’ime mmadụ iri ga-agụ ndị nke ọzọ. Chọrọ isiokwu nke ga-arata ndị ọbịa gị ka ị pịa ma gụọ ọdịnaya gị.
Nke abuo, oge ịmepụta 300-500 blog post adịkwaghị. Contentdị ogologo oge ejirila. Ebe blọgụ gị ga-adị ogologo, baa uru ma kụzie ihe. Ndị na-ege gị ntị ga-enwerịrị uru na ya. Ebe ọ bụ na ị na-ede ọdịnaya dị ogologo, ịnwere ike ịgbakwunye foto, eserese na infographics na ya iji mee ka ọ dị mfe ndị na-ege gị ntị ịgụ.
I nwekwara ike ijikọta njikọ blọọgụ metụtara na blọọgụ gị ma ọ bụ na weebụsaịtị ndị ọzọ n'ime post gị iji mee ka ogo ya kawanye mma.
Kwụpụ 6: Soro Ndị Na-ege Gị Ntị Ghara
Otu ụzọ ị ga-esi mee ka ndị na-ege gị ntị laghachi na blọọgụ gị bụ iso ha na-emekọrịta ihe. Nke a ga - enyere gị aka ịmepụta obodo siri ike na gburugburu blọọgụ gị. Ka ndị na-ege gị ntị na-agụ blọọgụ gị ma jiri ihe ndị dị mkpa zụlite ha, ha ga-amalite ịhapụ nkwupụta gị na post blọgụ gị na ọwa mgbasa ozi gị. Jide n'aka na ị zaghachi okwu ha niile. Elegharala ha anya. Mee ka ọ dịrị ndị na - agụ ya mfe ịkpọtụrụ gị site na itinye peeji nke kọntaktị ma ọ bụ adreesị ozi-e na blog gị.
Kwụpụ 7: Gbanwee ndị na - ege gị ntị ma mepụta ndị na - eduga gị
Eziokwu bụ, 95% nke ndị na-eleta weebụsaịtị gị agaghị alọghachi ọzọ. Nke ahụ pụtara obere ọgbọ ọhụụ maka azụmaahịa gị. Nwere ike idozi nsogbu a site na iji retargeting. Nwere ike weghachite ndị na - agụ blọgụ gị iji weghachite ha na webụsaịtị gị ma ọ bụ mee ka ha gbanwee gaa na ndu. I nwere ike ime nke a site na itinye pixel ma ọ bụ koodu na weebụsaịtị gị. Mgbe onye ọ bụla bịara na peeji gị ka ị gụọ ọdịnaya ahụ, ịnwere ike iweghachite ha na mgbasa ozi na weebụsaịtị ndị ọzọ ma ọ bụ na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Iji maa atụ, ọ bụrụ na mmadụ abịa na websaịtị gị ka ị gụọ ọdịnaya gị mana ịdenyeghị aha ma ọ bụ debanye aha maka nri magnet gị, ị nwere ike iso ha gafee web. Ha ga-ahụ ụdị gị mgbe niile ma ọ ga-echetara ha onyinye gị. Iweghachigharị na-arụ ọrụ nke ọma. Weebụsaịtị ndị ọbịa ndị na-retargeted na ngosi mgbasa ozi bụ 70 percent yikarịrị ka tọghata. Nke a bụ ihe kpatara ya otu n’ime ndị ahịa ise ugbu a nwee ego eji etinye ego iji weghachite.
Iji ahia ọdịnaya maka ọgbọ ndu bụ usoro dị irè. Ihe ikwesiri ime bu ka isoro ntuziaka di n’elu.
You gbalịrị iji ahịa ọdịnaya maka ọgbọ ọgbọ tupu?
Pss… ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere isiokwu ọgbọ na-eduga anyị ka anyị depụtara ndepụta na-ekpo ọkụ Atụmatụ 101 iji bulie nsonaazụ ọgbọ ọgbọ gị!
Tags: akụkọ ndị na-ege ntịb2bb2b ahia ahiaịde blọgụika akwadomara amaracontent Marketingozina-eke akara nkwado-eche-ireikwusa ozi ọma nke ndị ahịaezi ndị ahịanjigide ndị ahịaederedenjikọ akaGoogle Analyticsgoogle analytics na-ege ntị na-akọedu ọgbọndu nurturingndunduInfographics Ahịamini-N'ezieNkwado ire ahịandị na-ege ntịgbasieọdịnaya vidiyowebinarsNkeji
Onye isi na ngalaba-onye guzobere na LeadsBridge. Sulọ ọrụ akpaaka maka ndị mgbasa ozi Facebook. Mgbasa ozi na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi. Budata Stefan Facebook Ads Insider's Hacks.
Ntuziaka maka obere ụlọ ọrụ iji kpọsaa na Facebook